Síminnသည်အိုက်စလန်ရှိကြည့်ရှုသူများအားအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် UHD လွှမ်းခြုံမှုပေးရန် MediaKind ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Síminnအိုက်စလန်အတွက်ကြည့်ရှုရန်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ UHD လွှမ်းခြုံကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ MediaKind ရွေးချယ်
MediaKind ရဲ့အလှူငှပေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးနည်းပညာများသမာဓိနှင့်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်၏Síminnရဲ့တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံ၏လုံခြုံ မှစ. ဖြန့်ဖြူးထိန်းသိမ်းရန်
ဖြန့်ကျက် MK RX1 ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနိမ့်အောင်းနေချိန်, Multi-codec, Multi service ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီကုဒ်ဒါနှင့် MK ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခြွင်းချက် access ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်
ပရီးမီးယားလိဂ် Productions နှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်းSíminnရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှမြင်ကွင်းနှင့်အသံအတှေ့အကွုံကယ်တင်တတ်၏တဲ့ Pre-စမ်းသပ်ပြီးနှင့် configured ဖြေရှင်းချက်သေချာ
FRISCO, Texas - စက်တင်ဘာလ 14, 2019 - MediaKind တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနည်းပညာခေါင်းဆောင်, (၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျကိုကာကွယ်ရန်ကယ်နှုတ်Síminn, အလန်ထုတ်လွှင့်ကရှေးခယျြခဲ့သHD) နှင့်ဘောလုံး၏ Ultra-high definition (UHD) ထုတ်လွှင့်အိုက်စလန်ဖြတ်ပြီးပရိတ်သတ်တွေဖို့အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတိုက်စစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖြန့်ကျက် MK RX1, မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နိမ့်ဆုံးအောင်းနေချိန်နှင့်အတူအလှူငွေကွန်ရက်များအနှံ့တန်ဖိုးရှိသော, အရည်အသွေးမြင့်မား, အကြောင်းအရာ၏သမာဓိကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် multi-codec, Multi-service ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီကုဒ်ဒါတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ကနဦးလျှောက်လွှာတစ်ခုလုံးကိုဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းမြင့်မားနည်းနည်း-rate ကို UHDTV န်ဆောင်မှုရန်ဒီကုဒ်Síminn enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဖြန့်ကျက်လည်း MK ဒါရိုက်တာတစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ခြွင်းချက် access ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့်Síminnဤမြင့်မားအဖိုးတန်တိုက်ရိုက်အားကစားအကြောင်းအရာများ၏အဓိကဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
MK RX1 ရဲ့ software နှင့်လျှောက်လွှာ-based ဒီဇိုင်းSíminnတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ MK ညွှန်ကြားရေးမှူးများမှတဆင့်သူတို့ကိုဖြန့်ဝေမီ, တခါမှာ feeds 12 မှတက်ရန်ဒီကုဒ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအနိမ့်အောင်းနေချိန်ဖြေရှင်းချက်အကြောင်းအရာမျိုးစုံ devices တွေကိုဖြတ်ပြီး, တတ်နိုင်သမျှအစစ်အမှန်အချိန်အဖြစ်အနီးကပ်ပရိသတ်တွေပေးပို့နေသည်သေချာ။ MediaKind ရဲ့ RX1 applications များ၏စွယ်စုံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သဘောသဘာရိုးရာလက်ခံပစ္စည်းအဖြစ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုသာဓကအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ပိတ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း (COTS) ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကွပ်မျက်ခံရဖို့ software ကိုအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်စွမ်းရည်ကိုများစွာသောလူကမ်းလှမ်း ။
Bjarki Jónsson, Manager ကို, တီဗီဌာန, Síminn, said: "တိုက်ရိုက်အားကစားလွှမ်းခြုံလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအထက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း captivate တစ်မူထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပြီးကျွန်တော်လန်ပရိသတ်တွေလှပတဲ့ဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အရည်အသွေးမြင့်အတွေ့အကြုံကိုပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ သူတို့ကနိမ့်ဆုံးအောင်းနေချိန်နှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးဖြစ်ပျက်အဖြစ် MediaKind နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နှင့်၎င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင် RX1 ဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးဘောလုံးအချိန်လေးကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ "
Damien Montessuit, ဒေသဆိုင်ရာဌာနမှူး, EMEA, said: "ကျနော်တို့ကအိုက်စလန်ဖြတ်ပြီးဘောလုံးပရိသတ်တွေအဘို့အထူးချွန်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ UHD ဂိုးအတွေ့အကြုံများကို enable ပရီးမီးယားလိဂ် Productions နဲ့Síminnအတူအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်များဖြန့်ကျက်မှတဆင့်ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်တဦးတည်း၏ Siminn ရဲ့တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံ၏တန်ဖိုးပိုကောင်းအောင် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သာလွန်အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့် encryption ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ "
MK RX1 UHD, HEVC ကုဒ်နိုငျသညျ, HD HEVC, MPEG-2, MPEG-4 AVC compressed စီး,4ရှိမရှိ: 2:0သို့မဟုတ် 4: 2: 2, 8-bit မှာသို့မဟုတ် 10-bit နဲ့လက်ငင်းတစ်အကွာအဝေးကနေတဆင့် compressed လုပ်မထားတဲ့ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်။ codec ၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ် မှစ. အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ မှုခင်းရေမှတ်နည်းပညာနှင့်အတူ coupled - - MK ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မြင့် 128-bit မှာ encryption ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နိုင်စွမ်းတားဆီးရန်နှင့်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်၏ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်မှမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုအကြောင်းအရာခိုးကူးတားဆီးကူညီဖို့အဖြစ်ပိုကောင်းနောက်ဆက်တွဲမိတ္တူကာကွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီး။
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-09-16
နောက်တစ်ခု: BirdDog ဖြန့်ချိ P4K - တစ်4"Sony ကအာရုံခံ Featuring တစ်ဦးက 1K အပြည့်အဝ Bandwidth NDI® PTZ ကင်မရာ